Graders Ary Sorters, Fambolena Products Job Description / Fanendrena Ary Duty Sample – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Graders Ary Sorters, Fambolena Products Job Description / Fanendrena Ary Duty Sample
Grade, isan-karazany, na mifindra sakafo izay rehetra sy ny toeram-pambolena hafa entana amin'ny sizing, kilao, alokaloka, na ny aretina.
Job Skills fepetra takiana mialohan'ny ahafahana
Laharana sy ny karazana vokatra araka ny singa toy ny ohatra loko, karazana, halavan'ny, midadasika kokoa, mijery, hevitra, hanitra, ary ny kalitao mba hahazoana antoka fa mety fikirakirana sy ny fampiasana.
Misamboaravoara malfunctioning na ambany vokatra na zavatra tsy mahazatra, sy ny toerana entana izay azo ekena eo amin'ny pako noho ny fanaraha-maso izay kokoa.
Mandanja zavatra na fanombanana ny farantsa, aesthetically na hahatsapa.
Apetraho eo amin'ny fitoeran entana araka ny ambaratonga sy ny ambaratonga naoty amin'ny vilany.
Tatitra ID na kilasy be eo amin'ny tapakila, na amin'ny fandefasana, nahazo, na ny varotra lamba firakotra.
Tufts fibre tsy miankina eo amin'ny rantsan-mamaritra mampivondrona hatsaran'ny fitaovana sy ny hery.
Ny mamaky fehezanteny Fahalalana-Ny fahalalana sy ho vonona amin'ny asa-fehezanteny mifandray rakitra.
Fahaiza-mihaino-fampisehoana feno tsara ny ataon'ny hafa hoe:, mampiasa ny fotoana ho anao ny mandre ny anton-javatra natao, fanontaniana toy ny manontany tena tsara, ary tsy fanotofana amin'ny fotoana izay tsy manara-penitra.
Namokatra-niresaka mahomby voasoratra teo ho mendrika ny zavatra ilain'ny mpihaino.
Miteny--miresaka amin'ny hafa mba hampitana fanazavana araka ny tokony ho.
Matematika-Mampiasa maths manamboatra olana.
Research-ny fampiharana ny politika ara-pitsaboana sy ny fomba mba manamboatra olana.
Criticalthinking-Mampiasa ny rariny sy ny antony ny mamantatra ny fahaiza-manao sy ny kileman-toetra ny hitany, Alternate vahaolana, na manakaiky ny olana.
Active Learning-fahatakarana ny vokatry ny Info izay ho avy vaovao ho an'ny tsirairay sy ny efa misy problemsolving sy ny fandraisana fanapahan-kevitra.
Paikady-Mampiasa fianarana sy ny fifantenana coachingANDinstructional teknika sy teknika tsara noho ny toe-draharaha, rehefa mampianatra mahafehy na hevitra vaovao.
Tracking-MonitoringORAssessing fahombiazana ny tenanao, ry namana izay hafa, na fikambanana mba hamorona fanovana na handinika remedial hetsika.
Social fidirana-Ny hoe mahalala othersA fironana sy ny fahafantarana ny antony rehefa satria.
Control-manova hetsika raha oharina amin'ny asa othersI.
Fandresen-dahatra-mandresy lahatra ny hafa mba hanova ny loha na ny asa.
Discussion-hamonjy ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana variances.
Fanofanana-HOWTO Naniraka ny hafa hanao zavatra.
Service Orientation-antoka mitady fomba hanampiana ny olona mba.
Advanced Problemsolving-manavaka mandroso sy nandinika olana vaovao manan-danja izay mihevitra sy hamokatra safidy sy hampihatra fanafody.
Evaluation-mandinika asa takiana alohan'ny entam-barotra, ary maniry hanao fisehon'ny.
Teknolojia Design-Engineering mba hanolotra mpampiasa sy ny fanaovana fitaovana na miova fepetra takiana.
Tools Selection-Famantarana fitaovana sy ny fitaovana ilaina ho zava-dehibe ny hatsaram-panahy mba hamono ny asa.
Fametrahana-Manampy fitaovana, milina, tariby, na fandaharana hanome fahafaham-po fepetra takiana.
Development-composant solosaina fangatahana asa isan-karazany izay.
Operation Tracking-Topy Maso Eran antso, gauges, famantarana na fanampiny mba ho azo antoka misy fitaovana miasa amin'izao fotoana izao araka ny tokony ho.
Dingana sy fomba Control-mizara tsara ny fitaovana na fomba.
Maintenance-ny manatanteraka mahazatra sy ny fikojakojana ny fitaovana, rehefa mamantatra ary inona no karazana miasa eo ho ilaina.
Fanamboarana-miasa mamaritra antony fahadisoana sy ny fanapahan-kevitra toy 'zao ny momba izany na dia iray akory.
-Manamboatra indray ny rafitra na ny fitaovana mampiasa ny fitaovana izay tena ilaina.
Quality-Control Rehefa nandinika-manome fanadihadiana sy ny fitsapana ny vokatra, mpamatsy, na ny asa hanombanana fahombiazana na ny kalitao.
View sy ny Decisionmaking-jerena ny tombontsoa sy ny fandaniana ankapobeny ny asa azo atao mba mifidy ny iray izay tena mety.
Systems Analysis-famaritana ny fomba fanitsiana ao amin'ny habakabaka, raharaham-barotra, ary koa ny toe-piainana hisy fiantraikany soa ary inona no karazana fomba fiasa tokony hiasa.
Fomba Evaluation-mampiavaka dingana na rafitra hita ny fampisehoana ary koa ny marina na ny dingana ilaina mba hanatsarana fahaiza-miasa mahomby, araka ny tanjona ny fitaovana.
Time-Management-mizara tsara ny fotoana ny olon-kafa miaraka oneis ny fe-potoana.
Asa ara-bola Resources-manapa-kevitra ny fomba vola miditra dia handeha ho ampiasaina mba hahazo ny asa vita, sy ny tamin'ny fanaovana kaonty momba ireo fandaniana.
Fanaraha-maso ny fitaovana Resources-nijery sy ny fandraisana ny mety fampiasana ny orinasa, fitaovana, ary nanana fitaovana ilaina ny manao asa manokana.
Fanaraha-maso ny Personnel Resources-Mamorona mampahery, ary mitarika ry namana satria izy ireo miasa, famantarana ny olona mahomby indrindra ho an'izany asa.
Tsy ampy noho ny Top-School Diploma
Senior High School Diploma (na GED na Senior School Equivalence fahaizana)
Maro Faculty Classes
Asa Control Skills Mila
fikirizana – 81.08%
antony manosika – 84.59%
Olana ho an'ny Hafa – 82.64%
Social Fanitsiana – 84.27%
Fahafehezan-tena – 84.64%
Pressure Tolerance – 80.58%
azo itokisana – 94.96%
Mifantoha Details – 87.92%
Tsy Nivadika – 89.27%
fahaleovan-tena – 87.74%
zava-baovao – 79.68%
poto-fisainana – 86.09%